Domperidone इंजेक्शन - चीन Ningbo दोस्रो हर्मोन
को 【साधारण नाम】 Domperidone इंजेक्शन पशु 【पशु औषधि को नाम】 सञ्चालन म्यानुअल: Domperidone इंजेक्शन 【अंग्रेजी नाम】: Domperidone इंजेक्शन 【पिनयिन मा नाम】: Duopanlitong Zhusheye 【मेजर संघटक】: Domperidone 【विवरण】: यो उत्पादन हो बेरंग स्पष्ट तरल 【Pharmacological कार्य】: यो एक dopamine रिसेप्टर antagonist छ; Domperidone GTH र ovulation को जारी माछाको restraining देखि dopamine रोक्न सक्नुहुन्छ साथै GT induce बलियो बनाउन LHRH-A2 र sGnRH-एक ...
को सञ्चालन म्यानुअल Domperidone इंजेक्शन
【साधारण नाम】: Domperidone इंजेक्शन
【पिनयिन मा नाम】: Duopanlitong Zhusheye
【मेजर संघटक】: Domperidone
【विवरण】: यो उत्पादन बेरंग स्पष्ट तरल छ
【Pharmacological कार्य】: यो एक dopamine रिसेप्टर antagonist छ; Domperidone GTH र ovulation को जारी माछाको restraining देखि dopamine रोक्न सक्नुहुन्छ साथै LHRH-एक बलियो2GTH जारी र ovulation induce र sGnRH-एक।
【सङ्केत गर्छ】: यो संयुक्त रूप LHRH-एक साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ2माछा लागि empathema को कृत्रिम प्रेरणा र ovulation लागि
【उपयोग र औषधिको खुराक】: पहिलो, सामान्य नुनखरा उचित रकम यो उत्पादन पतला पानी हरेक milliliter5~ 10mg domperidone समावेश सम्म। दोश्रो, LHRH-एक मिश्रण2इंजेक्शन लागि LHRH-एक प्राप्त गर्न केही सामान्य नुनखरा संग25 ~ 20μg / एमएल एकाग्रता एक साथ समाधान छ। आवश्यक औषधिको खुराक समायोजन र माथि दुई समाधान मिश्रण। त्यसपछि, intraperitoneal इंजेक्शन (pectoral फिन को आधार) वा intramuscular इंजेक्शन (पृष्ठीय फिन को आधार नजिकै) को लागि मिश्रण लागू हुन्छ। निम्नानुसार प्रति किलोग्राम महिला माछा लागि औषधिको खुराक छ:
आक्षेप, crucian आक्षेप घाँस आक्षेप chub, bighead dace ब्रीम clarias fuscus loach megalobrama amblycephala Erythroculter ilishaeformis
कालो आक्षेप दुई इंजेक्शन आवश्यक छ। पहिलो इंजेक्शन लागि औषधिको खुराक: डोम 5mg + LHRH-एक25μg; दोस्रो इंजेक्शन डोम 5mg + LHRH-एक एक औषधिको खुराक संग 24 ~ 48 घण्टा पछि दिइएको छ210μg।
पुरुष अभिभावक माछा मात्र माथि महिला अभिभावक माछा लागि औषधिको खुराक को 1/2 आवश्यक
【प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया】 कुनै प्रतिकूल दबाइ प्रतिक्रिया सिफारिस औषधिको खुराक हुन्छ भने पाइन्छ।
【विषयहरूलाई चाहिन्छ ध्यान】:
यो उत्पादन प्रयोग 1 अभिभावक माछा मानिसहरूले खान निषेध गरिएको छ
2. यो 20 ~ 30 ℃ को एक पानी तापमान मा राम्रो प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सक्छन्। पानी तापमान 20 कम भन्दा ℃ छ भने, spawning प्रेरणा को परिणाम अलिकति प्रभावित हुनेछ।
3. बढ्तै उच्च औषधिको खुराक प्रारम्भिक ovulation गर्न सक्छ र यसको प्रजनन दर असर गर्नेछ।
4 यो प्रयोग गर्नु अघि दबाइ तयार राम्रो छ। यो तयार दबाइ 0.5-1 घण्टा भित्र इंजेक्शन गर्नुपर्छ।
अघिल्लो: इंजेक्शन लागि कम्पाउन्ड एस-GnRHa (Ovuhom)
अर्को: इंजेक्शन माछा प्रयोगको लागि LHRH-A2
ट्राउट फार्महरु हर्मोन लागि माछा प्रजनन Ovaprim, Spawning Ovaprim सुधार